कालिकोटका एक युवक द्धारा जापानवाट उर्जामा पहिलो विद्यावारिधि ! « Bagmati Online
कालिकोटका एक युवक द्धारा जापानवाट उर्जामा पहिलो विद्यावारिधि !
कालिकोटं । कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लाबाट पहिलो पटक दिनेश कुमार शाहीले उर्जामा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ । विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमध्ये एक जापानको टोक्यो सिटी युनिभर्सिटीबाट शाहीले विद्यावारिधि गर्नु भएको हो । उर्जाको खानीका रुपमा मानिएको कर्णालीबाट उर्जामा विद्यावारिधि गर्ने शाही पहिलो बन्नु भएको छ ।
टोकियो सिटी विश्वविद्यालयले शुक्रबार एक विशेष समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको हो । नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गणितमा स्नातकोत्तर समेत गर्नु भएका शाहीले विकासोन्मुख देशहरुले उर्जामा कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान गर्नु भएको छ । रास्कोट–५, कालिकोटको एक सामान्य परिवारका शाहीको यो अध्ययनले नेपालको उर्जा विकास र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने आशा गरिएको छ ।
विद्यावारिधिको क्रममा शाहीका अनुसन्धानमूलक २ वटा सामग्री विश्वकै नम्बर १ जर्नल एल्सेभिरद्वारा प्रकाशित ‘इनर्जी एण्ड विल्डिङ’ र ‘विल्डिङ एण्ड इन्भारोमेन्ट’ मा प्रकाशित भएका छन् । साथै उहाले विश्वविद्यालयबाट विश्वका धेरै गोष्ठी, सेमिनारहरुमा सहभागी भएर आफ्ना प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ । उहाले टोक्यो युनिभर्सिटीबाट वेस्ट प्रिजेन्टेशन अवार्ड र हाइ इम्प्याक्ट जर्नलमा प्रकाशन गर्न सफल भएकोमा अवार्ड प्राप्त गर्नु भएको छ । एल्सेभिरमा जर्नलमा प्रकाशित शाहीका आलेखमा घरमा प्रयोग हुने ऊर्जा र समग्र ऊर्जाको तर्कसंगत प्रयोगका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उहाको यो अध्ययन उर्जा क्षेत्रको बहसमा नयाँ अवधारणा मानिएको छ ।